FIZAHAN-TANY : Misy zohy tsy lavitra enina azo tsidihina ao amin’ny kaominina Belobaka
Ankoatra ny zohy malaza any Anjohibe dia misy zohy tsy lavitra azo tsidihina koa ao amin’ny Kaominina Belobaka ao. 1er août 2017
Araka ny nambaran’ireo mpitarika dia misy enina ny zohy ao, ka ny voalohany dia ny voatokana izay lava indrindra, voalaza fa mivoka hatrany amin’ny Cirque rouge izy io.
Tao no voalaza fa nieren’ireo olona tao amin’ny foko sakalava nioko ny fahavalony taloha. Ny zohy faharoa dia antsoina koe katedraly, izay ngeza sy avo miendrika katedraly tokoa. Ny zohy fahatelo indray no antsoina hoe Tarzan.
Araka ny tantara dia tao no nanaovan’ny mpioko ny fivoriambeny. Ny zohy fahaefatra indray no lazaina fa ‘la grotte des femmes’ noho izy misy sary nonom-behivavy. Ny ‘grotte trône’ kosa no fahadimy, mbola ahitana hatramin’izao ny fandriana fatorian’ny mpanjaka sakalava fahiny sy ireo vilia fihinanany, araka ny fanazavana hatrany. Ny zohy fahafito kosa no atao hoe ‘grotte des hommes’.
Afaka tsidihina tsara izy ireo ary ny fikambanana Jeunes Avenirs de Belobaka no misahana ny fikarakarana sy fitarihana ireo mpizaha tany eny. Manomboka amin’ny 1 000 Ariary ho an’ny Malagasy ary 10 000 Ariary kosa ho an’ny vahiny ny saram-pitsidihana eny. Efa ifanarahana miaraka amin’ny Kaominina Belobaka io sara aloa eny ka izy ireo ihany no miantoka ny fandriampahalemana eny an-toerana. Anisan’ireo toerana azo tsidihina tsara ireo karazana zohy ireo mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra.